ဆူးလေ ဘားလမ်းတွင် လမ်းဘေးဈေးသည်များကို လိုက်လံဖမ်းဆီး ~ YaWai (ပိုင်စိုးသူ)
ဆူးလေ ဘားလမ်းတွင် လမ်းဘေးဈေးသည်များကို လိုက်လံဖမ်းဆီး
Postado Monday, April 23, 2012 at 11:37 AM
ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီဝန်းကျင်ခန့်တွင် သတင်းပေးသူတစ်ဦး၏ သတင်းပေးချက်အရ ဖမ်းဆီးရေး ကားတွေ့ရသည်ဟု ပြောဆိုလာသဖြင့် သွားရောက်စုံစမ်းရာ ဆုးလေ ဘားလမ်းတွင် လမ်းဘေး ဈေးသည် များကို ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရောက်ရှိသွားချိန်တွင် ဘာလမ်းတစ်ခုလုံး ရှင်းလင်းနေပြီး ဈေးသည်ကြီးတစ်ဦး ငိုနေသည်ကိုတွေ့ရ၍ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်များရှိကြောင်း ဈေးဗန်းများကို သိမ်းဆည်းသွားသည်များလည်း ရှိကြောင်း ဈေးသည်တစ်ဦးမှပြောသည်။
အဆိုပါငိုနေသောဈေးအဒေါ်ကြီးကိုမေးမြန်းကြည့်ရာ`အန်တီနာမည်က ဒေါ်တင်မြင့်။ သာကေတကပါ။ ပိုက်ဆံမပေးလို့ဆိုပြီး လာဖမ်းတာ။ တွန်းလှည်းတွေရော ခုံတွေရော နှစ်ရက်စက်တိုက် အဖမ်းခံရတယ်။ အခြား ဈေးသည်တွေလည်း အဖမ်းခံရတယ်။ အန်တီက နှစ်သိန်းဖိုးလောက်တော့ ပါသွားတယ်။ မိသားစု (၇) ယောက်ရှိတယ်။ မုဆိုးမပါ။ ဒီနေ့ရော သောကြာနေ့ရော။ရက်စက်လိုက်တာ။ ပစ္စည်းတွေပါ အကုန်မသွားတယ်´ ဟုပြောပြသည်။
အခြားအနီးဝန်းကျင်မှ တစ်ဦးပြောပြတာကတော့`အခြားသူတွေလည်းပါတယ်။ သူကတော့ အသိမ်းခံရတာများ တာပေါ့။ ၄ ဦးလောက်တော့ ပါသွားတယ်။ မနေ့ကသုံးဦး´ လို့ပြောပါတယ်။
ထိုသို့မေးမြန်းနေစဉ် ဖမ်းဆီးရေးကား ဖြတ်သွားသည်ကို မြင်တွေ့လိုက်ရ၍ ကားပေါ်တွင် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားသူ တစ်ဦးကို မြင်တွေ့လိုက်ရသည်။ ဈေးသည်များမှာလည်း ကားတွေ့သည်နှင့်သပစ္စည်များ အထိတ်တလန့် အပြေးအလွှားသိမ်းဆည်းနေကြသည်ကို မြင်တွေ့ရသည်။
Anonymous on April 24, 2012 at 3:43 AM
The incidents were started from the day when the dealings effective with YCDC and shoppers. All stalls are supposed to closed by 8PM, in fact with the dealings with YCDC staff, shoppers can open shops after 30 minutes till mid night.
YCDC staff are willing to be corrupted and dealings are the issues made up all the incidents. Both platform stall owners and YCDC must take responsible.